Iindaba -Ihagu kunye namaqanda aphaphazela umbona uphambene, imakethi yeamino acid iyeka ukuwa kwaye ichola
Xa ukukhutshwa kwamandla amatsha kuhlangana nentsholongwane entsha enesithsaba kunye nonikezelo olugqithisileyo kwimfuno, kwiinyanga ezidlulileyo, ii-amino acid ezininzi ziye zawa ukusuka encotsheni yentaba ukuya emazantsi entlambo, njenge-lysine, threonine, tryptophan, valine , njl.), Ngelixa umbona wempahla ekrwada uqhubela phambili kuyo yonke indlela, usenyuka ngokuhlanya. Iinkampani zeamino acid ziye zathwaxwa ngamacala amabini kwiindleko kunye namaxabiso. Ukongeza kwixesha lokugcinwa kobushushu obuphezulu, izinga lokusebenza kweefektri lehlile, kwaye inani labavelisi abayeka ukunika ingxelo kunye nokunyusa amaxabiso lenyukile. Ukuzaliswa kwekhaya kuye kwaqala kwakhona. Kulungile, imakethi yeamino acid iyekile ukuwa kwaye yathathwa ekupheleni kwenyanga, kwaye ukuthengwa kunye nokuthengisa kuphuculwe. Okwangoku, ixabiso lentengiso le-98% lysine yi-RMB 7-7.5 / kg, ixabiso le-methionine yi-RMB 18-19 / kg, ixabiso le-threonine yi-RMB 8-8.5 / kg, kwaye ixabiso le-tryptophan yi-RMB 43.5 -46 / kg.
Abavelisi bayeke ukuvelisa kwaye banike ingxelo rhoqo
Iifandesi ezilishumi zilandelelana zengqolowa yokugcina yethutyana ibone ukuthengiselana okuphezulu kunye neeprimiyamu eziphezulu. Imarike yengqolowa ishushu, ngokunyuka okungaphezulu kwe-100 yuan ngetoni nganye ukuqala kwenyanga. Ixabiso lentengo langoku le-2275.26 yuan / itoni inyukele kwelona nqanaba liphezulu kule minyaka mihlanu idlulileyo. Isidlo sembotyi yesoya nayo ilandele ngokufanayo. Ekuqaleni kwenyanga, inyuke nge-200-300 yuan / ngetoni. Umbona yinto ekrwada yee-amino acid ezinje nge-lysine, threonine, kunye ne-tryptophan. Iinkampani zokulungisa nzulu zommbila ziyaqhubeka nokunyusa ixabiso lokuthenga, kwaye iinkampani zokondla zonyuse iindleko ngenxa yezinto ezinkulu kunye nezinto ezithatha indawo yazo. Ukunyuka kwamaxabiso kwaqala kwi-50-100 yuan / ton. Imfuno yokwandiswa kwamandla eamino acid kulo nyaka ibuthathaka, abathengisi bathengisa iimpahla, abavelisi banciphisa amaxabiso ukukhuthaza ukuthengiselana, ukubonelela ngokuncipha ukunciphisa ilahleko kunye nokunciphisa uxinzelelo lwempahla.
Ukuphuculwa kokubuyiselwa kwezolimo emakhaya
Iplum iyatyatyamba emazantsi phakathi ukuya kuye ngasekupheleni kukaJulayi, kwaye imeko yezikhukula yehla ekupheleni kwenyanga. Kule nyanga, ukusebenza ngokufuya iinkukhu zasekhaya kuphuculwe, iinkukhu kunye namaqanda enyukile, kwaye namaxabiso ehagu anyukile. Ukuba yiTailai kakhulu, la maqanda alahlekile ngaphezulu kwesiqingatha sonyaka. Ukungena kwinqanaba lesaphulelo, amaxabiso amaqanda anyuke ngokuthe chu ngoJulayi, kwaye abathengisi bamaqanda bajika ilahleko ibe yinzuzo. Ngokwokulandelwa kwedatha kweHuitong, ukusukela nge-31 kaJulayi, amaxabiso aphakathi amaqanda yayiyi-8.05 yuan / kg, ukonyuka kwe-70% ukusukela ekuqaleni kwenyanga. Ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, izikhukula zibangele iintlekele ezingama-33.85 kumaphondo angama-27 (imimandla ezimeleyo noomasipala) kubandakanya iZhejiang, Anhui, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Chongqing, Sichuan, Guizhou, njl. inkulu kakhulu, kwaye uluhlu lweehagu zasekhaya luyaqhubeka ukuphucula. Ngokwokujongwa kwamanqaku angama-4000 oMphathiswa Wezolimo Nemicimbi Yasemaphandleni, isitokhwe seehagu kunye nokuzala kweemazi kumakhaya azalisayo kunyukile kwiinyanga ezi-5 zilandelelana.
Ukushwankathela: ukuhla kokubonelela, iindleko eziphezulu, izimo zengqondo zabavelisi kumaxabiso ziyanda, kwaye ubhubhane wasekhaya ulawulwa ngokufanelekileyo. Abanye abaphandi bathi izitofu zingafumaneka ukuze zisetyenziswe entwasahlobo elandelayo, ukuphuculwa kokusetyenziswa kweshishini lokutya kwasekhaya kuyaphucuka, ishishini lezolimo lwaselwandle liyachacha ngokuthe ngcembe, kunye namaxabiso okutya kwembotyi zesoya anyuke. Ngokuthanda imfuno yee-amino acid, imarike iyekile ukuwa kwaye yafumana kwakhona, kwaye imakethi iye yazinza kwaye yasebenza ngamandla. Nangona kunjalo, imeko yobhubhane welinye ilizwe isenobuzaza, phantse ibe ngama-200,000 amatyala amatsha afunyaniswa mihla le. Phakathi kwabo, i-United States, iBrazil, i-Indiya, i-Russia kunye ne-Mzantsi Afrika ziqatha kakhulu. Imfuno yamanye amazwe isabuthathaka, kwaye uninzi lweenkampani zasekhaya ziye zazizalisa izitokhwe zazo, zithintela ukubuyela kwintengiso.
I-L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm kwiBakala, 73-32-5 L-Isoleucine, Ukutya kwezilwanyana, L-Threonine kwiBakala lokutya, Ikhemesti yeBakala L-Leucine,